Qatar Airways Cargo dia mandefa serivisy natokana ho an'i Yangon
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Qatar Airways Cargo dia mandefa serivisy natokana ho an'i Yangon
Ny zotra Doha-Yangon-Doha dia atolotra indray mandeha isan-kerinandro miaraka amin'ny mpitatitra entana Airbus A330, manome mihoatra ny 60 taonina ny fahaizan'ny entana isaky ny mandeha.
Qatar Airways Cargo dia nanomboka serivisy mpitatitra entana mivantana any Yangon, Myanmar. Ny zotra Doha-Yangon-Doha dia atolotra indray mandeha isan-kerinandro miaraka amin'ny mpitatitra entana Airbus A330, manome mihoatra ny 60 taonina ny fahaizan'ny entana isaky ny mandeha.
Ny Lehiben'ny polisy misahana ny andraikitra ao Qatar Airways, Andriamatoa Guillaume Halleux, dia nilaza fa: "Faly izahay manangana ny làlan'ny mpitatitra entana fahavalo ho an'ny taona 2017, mifanaraka amin'ny fanitarana stratejika mankany amin'ny tambajotra sy ny sambo. Hatramin'ny nanalalahana ny firenena, i Myanmar dia nanana ny toekarena nitombo haingana indrindra tao amin'ny faritra ASEAN, ary ny fampiasam-bola avy any ivelany amin'ny varotra eo an-toerana dia nahita fitomboana lehibe. Faly be izahay fa izy no kaompaniam-piaramanidina iraisampirenena voalohany nanompo ity tsena vao misondrotra ity miaraka amin'ny serivisy mpitatitra entana satria mikasa ny ho mpanome serivisy ho an'ny fiaramanidina voalohany eto amin'ny faritra izahay. ”
Ny fanondranana sy ny fanafarana entana ao Myanmar dia nisondrotra 87% sy 58 isan-jato taonina metrika nanomboka tamin'ny taona 2014. Ny Qatar Airways Cargo dia manome ny fahaizan'ny kibony amin'ny sidina mpandeha isan'andro an'ny sidina mankany Yangon. Ny fanampiana serivisy mpitatitra entana natokana dia hanome fahafaha-manao fanampiny hanohanana ny fanondranana akanjo marobe any Myanmar, ary koa ny entam-barotra lehibe hafa, ao anatin'izany ny vokatra vaovao sy ny vokatra sakafo. Ny akanjo vita vonona no lohandohan'ny fanondranana natokana ho an'i Eropa sy Etazonia amin'ny alàlan'ny fijanonana tsy misy tohatra ao amin'ny foibem-pitandremana ao Doha. Ity serivisy vaovao ity koa dia hanamora ny fandefasana ireo fanafarana fanafody avy any Eropa mankany Myanmar amin'ny alàlan'ny vahaolana QR Pharma efa napetraka.
Azia Pasifika dia tsena fitaterana an-habakabaka voalohany ho an'ny Qatar Airways Cargo, ary tamin'ny fanombohan'ny serivisy mpitatitra entana vaovao ho an'i Yangon, dia nitombo ny tambajotran'io faritra io ho any amin'ny toerana valo. Qatar Airways Cargo koa dia manolotra fahaiza-manao kibo manan-danja amin'ny tanàna 29 ao amin'ny faritra, manome fatratra mitambatra isan-kerinandro mihoatra ny 8,000 taonina avy any Azia Pasifika. Vao tsy ela akory izay ny mpitatitra entana dia nandefa serivisy mpitatitra entana ho any Pittsburgh, izay lasa zotram-piaramanidina iraisam-pirenena voalohany nanolotra serivisy mpitatitra entana natokana ho an'ny tanàna.
Qatar Airways Cargo dia nankasitraka ny Boeing 747-8F voalohany sy ny Boeing 777F faha-XNUMX izay tafiditra ao anatin'ny drafitra fanitarana stratejika hanolorany ireo mpanjifany sy ny serivisy mpitatitra entana miaraka amin'ny sambo tanora sy maoderina. Ny mpitatitra entana koa dia manolotra vokatra miavaka toa ny QR Pharma, QR Fresh, QR Live ary QR Express amin'ny fahombiazana sy ny fanarahana ny fikirakirana ireo fanafody pharmaceutika sy ny entana mora simba, ny fitaterana ny biby velona ary koa ny fandefasana fotoana mahaliana.
Nahazo loka roa tany Azia ny mpitatitra entana: ny loka 'Carriers of the Year' amin'ny ankapobeny 'nataon'i Payload Asia sy ny' Cargo Airline tsara indrindra amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa 'nomen'ny India Cargo Awards.
Wyndham Hotel Group dia mandefa hevi-baovao farany misy marika roa any Miami
Mitohy ny fanitarana any Eropa sy Russia ny Qatar Airways